Nanomboka ny alahady lasa teo ny fandrobana sy ny fandorana maro samihafa taorian’ny fahafatesana olona miisa telo tao anatin’ny fahamaizana tsy misy fanazavana mazava. Anisan’ny kendrena manokana ny Nizerianina. Ambany loatra ny karama amin’ireo orinasa vahiny, kanefa ny vahoaka Afrikanina Tatsimo noana. Efa roa taona izay no niadian-kevitra tamin’ny mpitondra sy ny mpampiasa, saingy tsy nisy vahaolana, hoy ny mpitarika sendika sasany. Maro amin’ireo mpitarika sendika any an-toerana anefa no mihataka amin’io hetsika io ary manameloka ny herisetra. Tafiakatra 5 ny maty, ary 200 any ho any ny voasambotra nanomboka ny alahady lasa teo. Niely ny vaovao fa namaly bontana ny Nizerianina ka raikitra ihany koa ny fandorana orinasa Afrikanina Tatsimo. Tsy marina anefa izany fa fiaramanidina efa may tamin’ny oktobra 2018 iny nahely iny, hoy kosa ny fandisoana nivoaka. Na izany aza dia manahirana ny zava-miseho amin’i Afrika Atsimo firenen’i Nelson Mandela, izay Raiben’ny fampihavanana sy ny fiombonana. Tsy tao ihany fa teo amin’ny tantaran’izao tontolo izao. Mandeha ny fikaroham-bahaolana ary manomboka milamindamin-dratsy.